Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana HFE China Manufacturer
Description:Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana,Fiarovana ny tontolo iainana HFE Detergent,Fiarovan'ny fiarovan-tena HFE
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Famerenana ny Solosaina ho an&#39;ny Precision Elektronika > Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana HFE
Ny hydrofluoroether clean agent dia tsy fahampian-tsakafon'ny dielectric avoakan'ny tetezana, ny tebiteby ambany dia ambany , ny viscosite maivana, ny Cleanout Solution For Electronic Precision mora volatina tsy misy miala amin'ny toetr'andro sy ny tsy fahampian-tsakafo. Ny fiarovana ny tontolo iainana HFE dia manaparitaka haingana sy manaparitaka amin'ny rindrin'ny fitaovam-panafody sy ny fivoahana isan-karazany ny fanadiovana ny tontolo iainana , ary misy fiantraikany tsara amin'ny fako, ny famafazana, ny famafazana sy ny fanadiovana . Ny tsiranoka Hydrofluoroether dia vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana, sady tsy misy loko sy tsy misy poizina izy ireo, sady tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, ary mitoka-monina. Ny vahaolana fanadiovana HFE dia manana tsiranoka maromaro kokoa, ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany. Ny hexafluoropropyl methyl ether dia ampiasaina betsaka amin'ny fanadiovana ny fitaovana fototra, toy ny fanadiovana ny mari-pahaizana elektronika, ny PCB, ny fitaovana elektronika, ny fizarana mazava tsara, ny fanadiovana ny loko / lantihy, ny solika, ny LCD ary ny sarotra sns., ary azo ampiasaina ihany koa mba handotoana sy handotoana, fanandramana amin'ny fanodinana elektronika na fisedrana amin'ny rivotra, ary solvent.
2. AF-mikirakira fantson- jiro tsara, ary afaka diovina amin'ny elanelana, ary afaka manatsara ny sehatr'asa;
3. Solon -drongony miavaka tsara indrindra (54 ℃), ary azo ampiharina amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikorianan-tsakafo mandritra ny fanadiovana sy fanadiovana. tsy mampidi-doza zavatra , tsy mirehitra ary tsy misy pesta, tsy misy afo na teboka teboka;
5. Material Coating tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza, tsy manelingelina;
7. Ny ranon-tsakafon-tsakafon'ny simia rehefa vita ny fanadiovana dia azo averina amin'ny alàlan'ny fanivanana, ka mihena izany fatiantoka , fandaniana ny fandaniana.
Fampiasana ny fiarovan-tena amin'ny faneriterena
HFE Fanarenana ny ordinatera elektronika Contact Now
Vahaolana amin'ny fanadiovana hexafluoropropyl methyl ether Contact Now
Fiarovana sy fiarovana ny tontolo iainana Fiarovana ny tontolo iainana HFE Detergent Fiarovan'ny fiarovan-tena HFE